Umatshini wokucheba ingca, iBrashi umsiki uBlade, Isilinda iMower Blade - Zhengchida
I-Hangzhou Zhengchida Precision Machinery Co, Ltd (emva koku ebizwa ngokuba yi-Zhengchida) ngumenzi ophambili wee-blade zoomatshini egadini e-China. Iimveliso ezikhuphisanayo zibandakanya iLawn Mower Blades, iBrush Cutter Blades, iCylinder Lawnmower Blades, iHedge Trimmer Blades njalo njalo. Zonke iimveliso zixatyiswa kakhulu kwiimarike ezahlukeneyo kwihlabathi liphela.
17 iminyaka yamava atyebileyo
120+ Abasebenzi bezobugcisa
Sokufunxwa High Phakamisa ingca Mower Blade Ingca Cutti ...
I-Flail Knife / iLowder Mower Blade yeGrass Ukusika / ...
Amazinyo eBrashi umsiki weBlade
Umgangatho ophezulu weSilinda iMower Blade-Zcd-Hob-5-CYL ...
Umatshini wokucoca i-Lawn Blade ukutshintshwa kweToro-Lawn Mower ...
Ubunjani High Umtshini wokucheba irediyo Blade uthango kusicheme Bla ...
Iibrashi zamazinyo ezi-8 zamazinyo / iOctopus
Umtshini wokucheba ingca / Blade Knife for Ingca Cutting ...
Umgangatho ophezulu weBlade yeBhedi eBhedi
UZhengchida unakho ukubonelela ngenkxaso phantse kuyo nayiphi na imeko enokubakho ebandakanyekayo kumatshini wokucheba: ukusuka kukhetho lwesitayile, uyilo olwenziweyo, ulawulo lomgangatho, ukupakisha okwenziwe ngokwezifiso, isisombululo sezothutho, ukuya kwinkxaso yezobuchwephesha kunye nenkonzo.
Emva kokuphuhliswa okuqhubekayo phantse kweminyaka engama-20, iZhengchida inoluhlu olubanzi nolugqityiweyo lwemveliso yegadi. I-Zhengchida ngoku ineemodeli ezingaphezu kwe-2000 ezahlukeneyo zendlela yokucheba ingca egubungela phantse zonke iimodeli ezikhoyo kwintengiso.
Yenza eyakho iMower Blade
Ukulungele ukwenza iincakuba zakho zokucoca umbane?
Masifumane iimodeli ezifanelekileyo zeshishini lakho, kwaye uzenzele ngokwakho ngokongeza iinketho kunye neempawu ezikusebenzelayo.